Ururkii 8-aad oo Garowe looga dhawaqay
30 Dec 30, 2012 - 1:06:56 PM
Waxaa galabta 30 December,2012 magalada Garowe xarunta Puntland looga dhawaaqay Urur siyaasadeed loogu wanqalay UDAD kaasoo la sheegay inuu yahay urur siyaasadeedka dadka Puntland,munaasibad lagu soo bandhigay oo ka dhacday hotel Aaran ayaa waxaa kasoo qayb galay Mamulka ururka,Aqoonyahano,Nabadoono,Qurba joog iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Garoowe.
Bilowgii kulanka waxaa ka hadlay Siciid Yuusuf Nuur oo ka mid ah Aasasayaashii Ururkaan UDAD la yiraahdo,wuxuna sheegay asbaabta loo unkayna inuu yahay sidii wax badan loogu qaban lahaa shacabka reer Puntland,qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ahna u furan yahay ka qayb qaadashadiisa.
Gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee urur siyaasadeedka UDAD Mudane Siciid Faarax oo dhankiisa khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediyey kana hadlaya hadafka ururka,iyo tilmaamaha uu bixinayo ayaa marka hore qaab dhismeedka UDAD ku sheegey inuu yahay mid kooban,wuxuna raacshey inuu u dhisan yahay Aasasayasha ,Gudomiyaha iyo labadiisa ku xigeen iyo gollaha fulinta.
Hal ku dhiga Ururka ayuu ku sheegay gudoomiye Siciid Faarax inuu yahay Nabad,Sinaan,Cadaalad iyo horumar,wuxuna sidoo kale dadkii kasoo qayb galay ugu baaqay inay kaalintooda ka qaateen sidii ururka loo dhaqaajin lahaa howlaha horyaalana u qabsan lahaa.
Arimaha ugu waa wayn ee ururkaan uu xooga saari doona ayaa lagu sheegay inuu yahay Isbadan doon dhab ah,Nabadgalyada waarta,horumar joogta ah iyo waliba dhaqaale koraya,waxayna sidoo kale mamulka ururkaan ay tilmeemeen in shacabka Puntland loo sameyay loogana baahan yahay inay dhaqalaha ururka ku saacidaan.
Xukumada Talada Haysa ee Puntland ayay ugu baaqeen madaxda Ururka inay xaq dhowraan mucaaradka ,ayna qabteen shirwayne lagu lafo guro arimaha ay diidan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dowlada wax ka tirsanaya.
Nabadoon,Odayaal iyo dhalinyaro haween iyo rag iskugu jira oo goobta ka hadlay ayaa si wayn usoo dhaweeyay Urur-siyaasadeedkaan looga dhawaaqay magalada Garoowe,waxayna ugu baaqeen inay shacabka si cadaalad ah ugu adeegaan ugana bogsiiyaan arimaha ay tirsanayaan ee dhibaatada ku ah.
Ururkaani Garoowe looga dhawaaqay ayaa waxa uu noqonayaa urur-siyaasadeedkii 8-aad oo lagu dhawaaqo,walow ay maalin qura ka harsan tahay waqtigii ku dhawaaqista ururada axsaabta siyaasada Puntland.
X.Hantiwadaag oo Tartanka Radio Garowe ku guulaysatay
Cudurka Ebolaha side lagu kala qadaa?